I-CBD FAQ NGOMBUSO WOMBUSI CBD | ISITOLO SE-inthanethi se-CBD
I-CBD FAQ NGOMBUSO WOMBUSI CBD | ISixazululo Esingcono Kakhulu Sezempilo Ngo-2020
Amaqiniso e-CBD NEMIBUZO NGE-RED EMPEROR CBD
Yini i-cannabidiol (CBD)?
I-Cannabidiol noma i-CBD iyi-cannabinoid eyenzeka ngokwemvelo futhi ingenye yezakhi eziningi kakhulu zesitshalo se-hemp. I-CBD iphephile ukuthi ingadliwa futhi ayisebenzisi ingqondo. Sekuyisikhathi eside kunconywa ngemiphumela yaso ezuzisayo yezempilo ngaphandle kwemiphumela emibi yemithi ejwayelekile kadokotela.
Ngabe unabo abangane abahlala e-States lapho insangu isengavumelekile khona? Ungavumeli abangane bakho bathole inhlawulo nesikhathi sejele ngokubhema isitshalo, ubatshele ngathi IDelta 8 iTHC imikhiqizo esemthethweni yomfelandawonye ezifundazweni ezingama-50!
Ingabe inkampani yakho yomuntu wesithathu ihlola imikhiqizo yakho ikhwalithi nokuphepha?
Yebo. I-Red Emperor CBD iyaziqhenya ngokuba nezindinganiso eziphakeme kakhulu maqondana nobumsulwa, amandla, kanye nekhwalithi yemikhiqizo yayo. I-Red Emperor CBD ingumuntu wesithathu ohlolelwe i-Cannabinoid Profiling, Pesticide Testing, Microbiological Screening, and Analysis of Terpenes
Uvelaphi uwoyela wakho we-CBD?
Uwoyela wethu we-CBD wenziwa nge-organic Organic-standards hemp yezimboni ekhuliswe eCalifornia futhi ayi-100% ayinazo izithako zokwenziwa noma zokwenziwa. Amafutha we-Hemp avela ku-hemp yezimboni okwamanje asemthethweni ukuthumela ngaphakathi kwe-United States.
Ngabe Imikhiqizo Yakho Ye-CBD Izongenza Ngizizwe “Ngiphezulu?”
Cha. Ngeke uzwe umuzwa "ophakeme" lapho ufaka imikhiqizo kawoyela we-CBD. Uwoyela we-CBD osetshenziswe ku-Red Emperor CBD uvela ezitshalweni zezimboni zezimboni, ngakho-ke ngeke zikunikeze izithako eziphakeme ezifanayo ze-THC.
Ingabe imikhiqizo yakho ye-CBD izongenza ngihluleke ukuhlolwa kwezidakamizwa?
I-CBD ibhekwa njengengatholakali ekuhlolweni kwamathe noma umchamo. Konke I-CBD Enkulu Ebomvu imikhiqizo ivela ezitshalweni ze-hemp zezimboni futhi zithobela imithetho esebenzayo maqondana nokuqukethwe kwe-tetrahydrocannabinol (THC).
Funda Kabanzi Ekuhlolweni kwe-CBD Nezidakamizwa.
Ingabe kukhona imiphumela emibi engemihle?
Imikhiqizo ye-Red Emperor CBD iphephile, ayisebenzisi ingqondo, futhi ayinayo imiphumela emibi emibi eyaziwayo.
Kuyini ukukhishwa kwe-CO2?
I-Red Emperor CBD isebenzisa inqubo yokukhipha i-CO2 engenamakhemikhali esebenzisa i-carbon dioxide ecindezelekile ukudonsa ama-phytochemicals (njenge-CBD namanye ama-cannabinoids) avela esitshalweni. Le nqubo ayinazo izixazululi zamakhemikhali ezinolaka ezisetshenziswa kakhulu ukukhipha uwoyela we-CBD. Ukukhishwa kwe-CO2 kunobungani bemvelo futhi akunabuthi. Yize kubhekwa njengeyona ndlela ebiza kakhulu yokukhipha izitshalo emhlabeni, kubhekwa nokuthi iphephe kakhulu.
Ngiyithatha kanjani i-CBD futhi ngayiphi isilinganiso?
Ngaphambi kokungeza uwoyela we-CBD ohlelweni lwakho, njenganoma yikuphi ukwengeza, qiniseka ukuthi ubuza nodokotela wakho ukuze uqiniseke ukuthi le nto iyinto enhle ongayikhetha. Lokhu kubaluleke kakhulu uma uthatha imishanguzo yokulwa nokuquleka. Uwoyela we-CBD ungadliwa ngezindlela ezahlukahlukene: izithako zokuthambisa, ama-capsule, uwoyela ovutha, izilimi ezingezansi, noma izihloko. Lapho uthatha i-CBD, landela njalo imiyalo esephakeji lomkhiqizo owuthengile.
Uyini umehluko phakathi kwemikhiqizo egcwele ye-Spectrum, Broad Spectrum, neZero THC CBD?
Ingabe unikela ngenqubomgomo yokubuyisa?
Yebo. Ukwaneliseka kwakho kuyinto ehamba phambili kithi, yingakho i-oda lakho lisekelwa yisiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-90.
Ungakwazi ukuthumela ngemikhiqizo ye-Red Emperor CBD kuzo zonke izifundazwe?
Singathumela imikhiqizo ye-Red Emperor CBD kuzo zonke izifundazwe zase-US, ngaphandle kweKansas (KS), Arkansas (AR), neLouisiana (LA). Okwamanje asinakho ukuthunyelwa kwamanye amazwe.